FAHAVEREZANA POKETRA :: Vehivavy iray milaza fa novonoin'ny mpankanto iray • AoRaha
Tranga samihafa • Zavakanto
FAHAVEREZANA POKETRA Vehivavy iray milaza fa novonoin’ny mpankanto iray
Tsy nitsahatra nandrenesam-peo. Nanomboka tamin’ny sabotsy teo, dia niteraka ary nampi-teraka resabe tamin’ny tambajotran-tserasera sosialy ny fiparitahan’ilay vaovao nampitaina vehivavy iray tao amin’ny pejy “facebook”-ny izay milaza fa novonoin’ny mpanakanto malaza iray sy ireo namany izy, tao amina efitrano filanonana iray etsy amin’ny By Pass. Nambaran’ity vehivavy milaza ho voavono ity fa nangalarin’ireo mpanao feo lafikan’ny mpanakanto, sakaizan’ity mpanakanto malaza ity, ny poketrany rehefa izy nandeha namonjy toeram-pivoahana iny, ka teo no nanomboka ny disadisa.
Nitondra fanazava mikasika ny zava-nitranga ihany koa anefa ity mpana- kanto malaza ity, etsy ankilan’izay. Nolazainy fa fanendrikendrehana sy fanosoram-potaka no natao azy ireo satria rehefa nosavaina dia tsy hita tany aminy ilay poketra nolazaina fa nangalariny.
Namaky adihevitra maroloha ity fanambarana nataon’ity vehivavy ity hany ka niteraka tsy fitovian-kevitra teo amin’ireo mpikirakira ny fitaovan-tserasera. Tsikaritra ao anatin’ny fanamarihana ataon’izy ireo fa samy manana ny fironany ny tsirairay satria samy nampiseho sary maneho ny fahavoazany ny andaniny sy ny ankilany.
FANAFIHANA :: Namoy ny ainy ny olona akaikina mpanao gazety iray